News - waalka kubada heerkulka sare
API602 Faallooyin steel been abuur
Kiimikada iyo Petrochemical
Cryogenics iyo LNG
Saliida iyo Gaaska
Warshadaha saxarka iyo Waraaqda
Sida loo doorto walxaha waalka ee xaaladaha heerkulka sare
Nidaamka gudbinta dareeraha, waalka waa qeyb xakamayn lama huraan ah, oo inta badan leh shaqooyinka qawaaniinta, leexinta, kahortaga dib u soo noqoshada, jarista iyo shuntka. Waalka ayaa si weyn loogu adeegsadaa dhinacyada warshadaha iyo bulshada. Waalka heerkulka sare waa nooc inta badan lagu isticmaalo filtarka. Guryaheeda gaarka ah waa sida soo socota: waxqabadka daminta wanaagsan, daminta qoto dheer ayaa la samayn karaa; alxanka wanaagsan; nuugista wanaagsan ee saameynta, way adag tahay in lagu waxyeeleeyo rabshad; Jilicsanaanta xanaaqa waxay u egtahay inay yaraato iyo wixii la mid ah. Waxaa jira noocyo farabadan oo filtarka heerkulka sareeya. Kuwa ugu caansan waa heerkul sarefiltarka balanbaalis, heerkul sare fallaaraha, miirayaasha heerkulka sare, iyo heerkulka sare waalka albaabada.
Farsamooyinka heerkulka sare waxaa ka mid ah qalabka albaabbada lagu xiro ee heerkulka sarreeya, filtarka-xidha ee heerkulkiisu sarreeyo, qalabka lagu baaro heerkulka sare, filtarka kubbadda ee heerkulkiisu sarreeyo, heerkulka sare ee baalaalka balanbaalka, qalabka irbadaha ee heerkulkiisu sarreeyo, qalabka gaaska heerkulka sarreeya filtarka yareya cadaadiska heerkulka sare. Dhexdooda, kuwa sida badan loo isticmaalo waa qasnadaha albaabka, gloves gloves, jeegaga lagu baaro, filtarka kubbadda lagu buuxiyo iyo baalal balanbaal
Xaaladaha heerkulka sare ee shaqeeya badanaa waxaa ka mid ah heerkulka hoose, heerkulka sare high, heerkulka sare high, heerkulka sare high, heerkulka sare high, iyo heerkulka sare Ⅴ, oo si gooni ah hoos loogu soo bandhigi doono.
1. Heerkulka hoose-sareeya
Heerkulka hoose-sare wuxuu ka dhigan yahay in heerkulka shaqada ee waalka uu ku yaal gobolka 325 ～425 ℃ Haddii dhexdhexaadku yahay biyo iyo uum, WCB, WCC, A105, WC6 iyo WC9 ayaa badanaa la isticmaalaa. Haddii dhexdhexaadku yahay saliid baaruud ka kooban, C5, CF8, CF3, CF8M, CF3M, iwm, kuwaas oo u adkaysta daxalka sulfide, badanaa waa la isticmaalaa. Badanaa waxaa loo isticmaalaa aaladaha jawiga iyo aaladaha yareynta cadaadiska iyo dib u dhaca aaladaha coking ee sifeeyaha. Waqtigaan, furayaasha ka sameysan CF8, CF8M, CF3 iyo CF3M looma adeegsanaayo caabbinta u adkeysiga xalalka aashitada, laakiin waxaa loo isticmaalaa alaabada saliidda baaruuddu ku jirto iyo dhuumaha saliidda iyo gaaska. Xaaladdan oo kale, heerkulka ugu sarreeya ee shaqada ee CF8, CF8M, CF3 iyo CF3M waa 450 ° C.
2. Heerkulka sare Ⅰ
Marka heerkulka shaqada ee waalka uu yahay 425 ～550 ℃, waa fasal heerkulkiisu sarreeyo I (oo loo yaqaan 'PI class'). Waxyaabaha ugu muhiimsan ee waalka darajada PI waa "heerkulka sare Ⅰ fasalka dhexdhexaadka ah ee kaarboon chromium nickel dhif ah titanium bir tayo sare leh oo u adkeysata kuleylka" oo leh CF8 oo ah qaabka aasaasiga ah ee heerka ASTMA351. Sababtoo ah darajada PI waa magac gaar ah, fikradda ah birta biraha kuleylka badan (P) ayaa halkaan lagu soo daray. Sidaa darteed, haddii dhexdhexaadiyaha shaqeeya uu yahay biyo ama uum, in kasta oo birta heerkulka sare ee WC6 (t≤540 ℃) ama WC9 (t≤570 ℃) sidoo kale waa la isticmaali karaa, halka alaabada saliidda baaruuddu ku jirto sidoo kale loo isticmaali karo bir bir-kulul ah C5 (ZG1Cr5Mo), laakiin Laguma magacaabi karo halkan PI-class.
3. Heerkulka sare II
Heerkulka shaqada ee waalka waa 550 ～650 ℃, waxaana lagu sifeeyaa heer kul sare Ⅱ (oo loo yaqaan P Ⅱ). Waalka heerkulka sare ee PⅡ waxaa badanaa loo isticmaalaa aaladda kala-jajabinta shidaalka culus ee sifeynta. Waxay ka kooban tahay dahaadh heer sare ah oo dahaadhkiisu u adkaysto waalka oo loo isticmaalo biiyaha saddexda wareeg iyo qaybo kale. Waxyaabaha ugu muhiimsan ee waalka fasalka PⅡ waa “heerkulka sare Ⅱ fasalka dhexdhexaadka ah ee kaarboon chromium nickel dhif ah Titanium tantalum oo la xoojiyay birta kuleylka u adkeysata” oo leh CF8 oo ah qaabka aasaasiga ah ee heerka ASTMA351.
4. Heerkulka sare III
Heerkulka shaqada ee waalka waa 650 ～730 ℃, waxaana loo kala saaraa heer kul sare III (oo loo yaqaan PⅢ). Qalabyada heerkulka sare ee fasalka 'P mainly' waxaa badanaa loo isticmaalaa unugyada culus ee ba'an ee wax ka jaraya saliidda. Qalabka ugu muhiimsan ee waalka heerkulka sare ee PⅢ waa CF8M oo ku saleysan ASTMA351.
5.Kulka heer sare igh
Heerkulka shaqada ee waalka waa 730 ～816 ℃, waxaana lagu qiimeeyaa heerkulka sare ee IV (oo loo yaqaan 'PIV' oo gaaban). Xadka sare ee heerkulka shaqada ee waalka PIV waa 816 ℃, maxaa yeelay heerkulka ugu sareeya ee ay bixiso heerka ASMEB16134 heerka-heerkulka cadaadiska ee loo xushay naqshadeynta waalka waa 816 ℃ (1500υ). Intaa waxaa dheer, ka dib marka heerkulka shaqadu uu ka sarreeyo 816 ° C, birtu waxay ku dhowdahay inay gasho gobolka heerkulka been abuurka ah. Waqtigaan, biraha wuxuu kujiraa aaga cilladaha balaastigga ah, birtuna waxay leedahay caag balaaran, wayna adagtahay in loo babac dhigo cadaadiska shaqada ee sareeya iyo awooda saameynta oo laga ilaaliyo inay xumaato. Waxyaabaha ugu muhiimsan ee P-waalka waa CF8M ee heerka ASTMA351 sida qaabka aasaasiga ah "heerkulka sare Ⅳ dhexdhexaad kaarboon chromium nickel molybdenum dhif ah titanium tantalum oo la xoojiyay birta u adkeysata kuleylka". CK-20 iyo ASTMA182 istaandarka F310 (oo ay kujiraan maadada C ≥01050%) iyo F310H birta birta ka sameysan ee kuleylka u adkeysata.
6, heerkul sarreeya Ⅴ
Heerkulka shaqada ee waalka ayaa ka sarreeya 816 ℃, oo loo yaqaan PⅤ, PⅤ waalka heerkulka sare (loogu talagalay xirmooyinka xirmooyinka, ma nidaaminayo fureyaasha balanbaalis) waa inay qaataan habab naqshad gaar ah, sida dahaarka dahaarka dahaarka ama biyaha ama gaaska Qaboojinta hubi shaqada caadiga ah ee waalka. Sidaa darteed, xadka sare ee heerkulka shaqada ee waalka heerkulka sare ee PⅤ lama qeexin, maxaa yeelay heerkulka shaqada ee waalka kontaroolka kaliya laguma ogaanayo maaddada, laakiin qaababka naqshadeynta gaarka ah, iyo mabda'a aasaasiga ah ee habka naqshadeynta waa isku mid. Gawaarida heerkulka sare ee fasalka P can ayaa dooran kara waxyaabo macquul ah oo la kulmi kara waalka iyada oo loo eegayo dhexdhexaadkeeda shaqada iyo cadaadiska shaqada iyo qaababka naqshadeynta gaarka ah. Qaybta 'PⅤ valve' ee heerkulka sare, badiyaa fiiqda ama balanbaalka waalka fiiqda fiiqan ama balanbaalis balanbaal badanaa waxaa laga soo xulaa HK-30 iyo HK-40 aaladaha heerkulka sare ee ASTMA297. Daxalka u adkaysta, laakiin aan awoodin inuu u adkeysto naxdinta iyo culeyska cadaadiska sare.
Waqtiga boostada: Juun-21-2021
Badbaadinta iyo bedelka API 600 G ...
Sida loo doorto walxaha waalka ee hoosta sare ...
Mabda'a shaqada ee waalka korontada
Newsway Madax Madax heerkulka sare ee waalka
Suuqa waalka warshadaha ayaa ku jira qaab wanaagsan ...
Cinwaanka: Aaga Warshadaha DongOu, Oubei Yongjia Wenzhou City, Zhejiang China-325105
WENZHOU NEWSWAY VALVE CO., LTD. © Copyright - 2010-2022: Dhamaan Reserved Rights. Alaabada Kulul - Khariidadda bogga